Ciidamada AMISOM oo la wareegay Xarunta Golaha Shacabka – Marqaanmedia24.com
Ciidamada AMISOM oo la wareegay Xarunta Golaha Shacabka
March 17, 2018 maqal iyo muuqaal, wararka 1
Ku dhawaad 100 Askari oo ka tirsan ciidamada Ugand ee qeybta ka ah howlgalka AMISOM ayaa ku sugan xarunta.
DEG DEG VIDEO Khilaafka Gudoomiyha Baarlmaanka iyo RW. Khayre oo maraya meel xun MUUQAAL
Wararkii ugu danbeeyay Qarax Khasaaro geystay oo ka dhacay duleedka Muqdisho
Dadkani wax weyn baa ka qaldan runtii. Xildhibaannada codadka laga soo duubay iyo qaar Guddiga Joogtada ahaan u hadlayay iyo xataa Guddoomiye Jawaari qudhiisu midkood na shaaca ka ma qaadin mooshinka waxa sababay iyo eedeymaha Jawaari lagu qoonsaday toona. Shacabkii ayay ku hor cabanayaan oo haddana saxarka isha ku jira waa la wada qarinayaa.
Horta sideeda ba xeerar iyo qawaaniin in lagu dhaqmo loogu talo galay ayaa jira oo caalamka ka shaqeeya. Masuuliyad weyn baa ka saaran xubnaha dawladda iyo Golaha Shacabka ilaalinta nidaamka iyo isxaqdhawrka ka dhexeeya oo sidaasi aawadeed waa badownimo iyo nidaam xumo in markii la kala aragti duwanaado ba media-ha hawraarta la iskugu hor wiiq wiiqo mise mooshin baas lagu cararo.
Meeshu miyaanay lahayn maxkamado iyo xeer ilaaliyeyaal beladan isku maran kala haga oo kala basariya toloow? Kol haddii shacabweynaha xaajada la hor keenay, sow waajibku ma aha in khilaafku halka uu ka curtay iyo waxa sababay ba shacabka la hor dhigo si markaasi xal loogu raadiyo?